Olee otu Skype zukọta ugbu a na-arụ ọrụ, ụzọ kachasị mma Ọ bia maka oku vidiyo | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Mobiles, Kọmputa, software
Kemgbe mmalite nke forties, ojiji nke video akpọ ngwa abawanye ma ghọọ ihe kachasị nso na kọntaktị anụ ahụ na anyị nwere ike idobe usoro anyị hụrụ n’anya ma ọ bụ ndị enyi anyị, yanakwa ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ, maka ndị niile ahụ mere ọrụ site n'ụlọ.
WhatsApp, Facebook ozi, Hangouts, Skype, Zoom, Houseparty ... bụ ụfọdụ n'ime ngwa ndị a kacha eji eme ihe. N'ime ngwa ndị a niile, ihe kachasị mee ihe na afọ iri anọ a bụ Zoom, nke si na inwe nde ndị ọrụ 15 ruo ihe karịrị nde 200, uto nke ekpughewo adịghị ike niile nke ikpo okwu a.
1 Kedu ihe kpatara Mbugharị ji bụrụ ewu ewu?
2 Gini mere mbughari abughizi ihe bara uru?
3 Gịnị bụ Skype zute Ugbu a?
4 Otu esi eme oku vidiyo site na iji Skype Zute Ugbu a
4.1 Site na smartphone / mbadamba
4.2 Site na kọmputa
5 Ihe ndị achọrọ iji nweta oku vidiyo site na iji Zute Ugbu a
5.1 Site na ama ma ọ bụ mbadamba
5.2 Site na kọmputa
6 Nzukọ Ugbu a na Skype Group Chat
Kedu ihe kpatara Mbugharị ji bụrụ ewu ewu?
Mbugharị aghọwo ihe kasị eji ngwa maka ịkpọ oku vidiyo n'ihi ya mfe nke iji, ebe ọ bụ naanị na ị ga-pịa njikọ iji nweta oku vidiyo yana ihe nyere aka na ihe ruru mmadụ 40 nwere ike isonye na otu oku n'efu.
Eric Yuan, onye guzobere Zoom, kwuru na ya kere ọrụ ọhụụ a na-enye ụzọ dị mfe iji kpọọ oku vidiyo, site na njikọ dị mfe, nsogbu nke kwalitere mbugharị, nke ndị ọzọ nwere njikọ njikọta vidiyo, sonye ma bido gosipụta onyonyo nke uto na-adịghị mma, na-akparị ndị sonyere ...
Gini mere mbughari abughizi ihe bara uru?
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, Mbugharị egosiwo otu, na mgbakwunye ịbụ ọrụ ịkpọ oku vidiyo maka ụlọ ọrụ na ugbu a maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ọ bụkwa gigantic nsogbu maka nzuzo nke ndị ọrụ ya n'ihi na ọtụtụ flaws nche na a chọpụtara ma na ngwa maka mobile ngwaọrụ na na nche ogbugba ndu eji encrypt njikọ.
Nsogbu nchekwa nke manyere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ebe agụmakwụkwọ ka ha kwụsị iji ọrụ a na mgbakwunye na gọọmentị America, dị na oku vidiyo, video oku na encrypt n'etiti ziri ozi na-erite ma ọ bụghị na sava nke ụlọ ọrụ, nke mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta oku vidiyo niile.
Nsogbu a akwụsịghị ebe ahụ, ebe ọ bụ n'ihi enweghị nchebe na oku vidiyo, dị ka The Washington Post si kwuo, na ịntanetị anyị nwere ike eChọta ọtụtụ puku ntinye ederede dị n'ịntanetị site na iji ọchụchọ dị mfe, ebe ọ bụ na edere aha ndị a na aha yiri ya (n'ụzọ ezi uche dị na ọ ekpughebeghị otu esi eme ya), oku vidiyo onye ọ bụla nwere ike ibudata ma lelee.
A nsogbu anyị nwere ịgbakwunye otu n'ihu site iOS ngwa, nke anakọtara data onye ọrụ na ngwaọrụ site na Facebook Graph API, ọbụlagodi na anyị anaghị eji akaụntụ Facebook anyị abanye. A na-edozi nsogbu a ụbọchị ole na ole mgbe isiokwu nke Motherboard bipụtara na ọkwa nke ọdịda a.
Dbọchị ka e mesịrị, onye nyocha nchekwa ọzọ chọpụtara otú onye nrụnye maka Mac na Windows si jiri scripts na-enweghị ịjụ onye ọrụ maka ikike. inweta ikike ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na nsogbu nchekwa ndị a niile ezughi ezu maka ịtụle ịkwụsị iji Mbugharị, ịkwesighi ịga n'ihu na-agụ ihe. Ma ọ bụrụ na ị tinye mkpa nzuzo gị, Site na Microsoft ha weputara Meet Ugbu a, ọrụ na-arụ ọrụ otu ihe ahụ Mbugharị, mana nchekwa anyị nwere ike ịtụ anya n'aka Microsoft, onye na-akwado ọrụ a.
Gịnị bụ Skype zute Ugbu a?
Skype Zute Ugbu a, na-eme otu ihe ahụ bia na-enye anyị, mana n’adịghị ka nke a, nchekwa na nzuzo nke onye ọrụ karịrị nchekwa, ebe ọ bụ nnukwu Micrososft nọ n’azụ ọrụ ịkpọ oku vidiyo a. Iji nweta otu oku vidiyo, anyị ga-etinye ngwa ahụ (ọ dịghị mkpa na kọmputa) wee pịa njikọ ahụ.
N'adịghị ka Mbugharị, nke na-amanye anyị ịbanye maka ọrụ ahụ mgbe anyị wụnye ngwa na ngwaọrụ anyị, iji Zute Ugbu a, ọ dịghị mkpa imeghe akaụntụ Skype (Ọ bụ ezie na akaụntụ anyị ji na Windows 10 dị mma maka anyị), ebe anyị nwere ike iji ngwa ahụ na ọnọdụ ọbịa.
Mgbe anyị pịa njikọ iji sonyere mkparịta ụka, ọ ga-agwa anyị ka anyị banye aha anyi, ka o wee pụta n’akụkụ ihe oyiyi anyị nakwa ka ndị mmadụ nwee ike ịkpọ anyị aha anyị.
Otu esi eme oku vidiyo site na iji Skype Zute Ugbu a
Site na smartphone / mbadamba
Dị ka mbugharị, iji mepụta ogbako vidiyo ọ dị mkpa, ee ma ọ bụ ee, iji ngwa ọrụ gọọmentị dị maka iOS na gam akporo, iji mepụta ụlọ nzukọ. Naanị onye nwe ụlọ ga-eji ya, ebe ọ bụ na ndị ọrụ ndị ọzọ ga-pịa njikọ ahụ iji nweta ya.
Nzọụkwụ ịgbaso mepụta oku vidiyo site na iji Skype Zute Ugbu a:
Anyị na-emepe ngwa ahụ, anyị na-eji akaụntụ Microsoft abanye ya na ya (nke anyị ji na Windows Windows anyị arụ ọrụ zuru oke).
Ọzọ, anyị pịa bọtịnụ aka nri nke ngwa nke obere pensụl na-anọchi anya ya.
Ọzọ, anyị pịa Nzukọ.
Mgbe oyiyi igwefoto (n'ihu ma ọ bụ n'azụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ama ma ọ bụ tebụl) nke anyị ga-eji gosipụtara, pịa Kpee ọkpụkpọ òkù, na anyị na-eziga njikọ ahụ na ndị niile ga-esonye na vidiyo vidiyo.
Ndị mmadụ na-anata njikọ ahụ, naanị ga-etinye ngwa ahụ na mbụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ama ma ọ bụ mbadamba. Site na ịpị njikọ ahụ, Skype ga-emeghe ma ọ ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ iji dị ka ọbịa nke ngwa. Anyị na-pịa Ọbịa, anyị dere aha anyị ma sonyere nzukọ / ịkpọ oku.
Site na kọmputa
Ọ bụrụ na anyị na-eji kọmputa, usoro a dị mfe karị, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-enweta ya Skype weebụ iji mepụta Nzukọ ugbu a, site na njikọ a, ma si otú a mepụta njikọ nke ọnụ ụlọ nzukọ nke anyị ga-eso ndị niile chọrọ ma ọ bụ chọrọ ịbanye, anyị ekwesịghị ibudata ngwa dịnụ, ma Windows. ma ọ bụ macOS, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike ime ya ma ọ bụrụ na anyị maara ngwa ahụ.
Iji nwee ike iji ihe nchọgharị anyị maka nzukọ vidiyo site na Skype, nke a ga-abụrịrị Chrome, Microsoft Edge o ihe nchọgharị ọ bụla dabere na Chromium (Nwere Obi Ike, Opera, Vivaldi…).
Ihe ndị achọrọ iji nweta oku vidiyo site na iji Zute Ugbu a
Site na ama ma ọ bụ mbadamba
Iji jiri ọrụ oku ọhụrụ a ọ dị mkpa, ee ma ọ bụ ee, anyị nwere arụnyere ngwa Skype na ngwaọrụ anyịEe, ọ dịghị anyị mkpa ịnweta ngwa ịdebanye aha ma ọ bụ banye na akaụntụ anyị, ọ bụrụ na anyị nwere akaụntụ Microsoft (@outlook, @hotmail, @ msn ...)
Skype maka iPhonefree
Nanị ihe achọrọ iji nwee ike ịnweta oku otu Skype na-enye site na Meet Ugbu a, bụ otu ihe ahụ dị ka mgbe ị na-eke ha, na ihe nchọgharị anyị bụ Google Chrome, Microsoft Edge ma ọ bụ ihe nchọgharị ọ bụla dabere na Chromium. Ọ bụrụ na anyị enweghị otu n'ime ihe nchọgharị ndị a, site na ịpị njikọ ahụ, anyị nwere ohere ibudata Skype ma wụnye ya na kọmputa anyị ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịwụnye nke ọ bụla n'ime ihe nchọgharị ndị a.
Ekwesịrị icheta na ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ Windows 10 na ịnwere ụdị nke sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ, Microsoft Edge dabere na Chromium, awụnyere ya na kọmputa gị.
Nzukọ Ugbu a na Skype Group Chat
Mkparịta ụka Skype, Ha bụ oku vidiyo anyị na-amakarị na Skype, a na-ahaziri ha aha site na mbido, aha otu otu ma họpụta ndị sonyere na mbido mgbe emepụtara nkata ahụ.
Izukọta dị ka otu chats, enwere ike ịhazi ha ngwa ngwa ma kesaa ndị ọzọ na usoro abụọ dị mfe. Enwere ike gbanwee aha nzukọ ahụ mgbe ịmepụtara otu yana tinye foto profaịlụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Olee otu Skype zukọta ugbu a na-arụ ọrụ, ụzọ kachasị mma Ọbịbịa maka oku vidiyo